नारीवाद र नारी मुक्तिको सवाल – Chitwan Post
संसारमा नारीवादको इतिहास धेरै लामो छैन । यो १९औँ शताब्दीदेखि मात्र सुरू भएको हो । प्रथम महिला अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सन् १९११ देखि मनाउन थालेको पाइन्छ । तापनि, संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष मनाई १९७७ देखिमात्रै औपचारिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भनेर मनाउन सुरू गरेको हो । उतिबेलादेखि नै मनाउन थालिएको नारी दिवसको प्रगति केकस्तो छ, संसारभरमा नारी दिवस किन मनाउने, नारी दिवस भन्नेबित्तिकै पुरूष दिवस किन नमनाएको वा नारीले किन दिवस नै मनाएर सम्झना गर्नु परेको हो भन्नेजस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरुको उत्तर नारी दिवसमा एकदिन मात्र नभएर अन्य दिनहरुमा पनि खोज्नुपर्छ र यसमा नारीवादीहरु बढी अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसो त, अहिलेको संसारमा बदलिँदो परिवेश र अवस्थाले पुरूष दिवस पनि मनाउन थालिएको छ । सन् १९९९ देखि मनाउन सुरू गरिएको यो दिवस ८० भन्दा बढी देशहरुमा प्रत्येक वर्ष १९ नोभेम्बरका दिन मनाइन्छ । साथै, नोभेम्बर महिनालाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरूष महिना पनि भनिन्छ । जे होस्, हाललाई नारीवाद के हो, नारीप्रतिको दृष्टिकोण संसारमा केकस्तो छ, पुरूषप्रधान साम्राज्य नै किन जस्ता आदि चर्चाहरु भर्खरै मनाइएको नारी दिवसको सन्दर्भमा उठाउने जमर्को गरिएको छ ।
अंग्रेजी शब्द फेमिनिज्मको नेपाली रुपान्तरण नारीवाद भन्ने हुन्छ । समाजमा चिरकालदेखि प्रचलन रहेको लिङ्गकेन्द्रित पुरूष विचारधाराका साथै पितृसत्तात्मक धारणा र व्याख्याप्रति प्रश्नचिन्ह खडा गर्दै पुरूषद्वारा निर्धारित नारीको स्थान तथा परम्परागत मूल्य र विरोधको स्वरुपलाई नारीवाद भनिन्छ । यसरी नारीको हक, हित र समानताको पक्षधर मतलाई नारीवाद भनिन्छ ।
पाश्चात्य मुलुकमा नारी मुक्तिको संघर्ष लामै समयदेखि चल्दै आएको भएता पनि नारीवादी आन्दोलन र नारीवादी सिर्जनाको प्रयास सन् १९६० देखिमात्रै भएको पाइन्छ । पाश्चात्य प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटलले केही गुणको कमीका कारण नारी नारी भएको हो भन्दै नारीको कमजोरीसमेत औँल्याएका छन् । सेन्ट टमस एक्विनसले पनि नारीलाई अपूर्ण मानिस भनी नारीको खोट देखाएका छन् । फ्रायडले समेत नारीमा पाइने ईष्र्या, सोचलगायतका शारीरिक बनोटगत अपूर्णताको परिणाम नारी हो भनेका छन् । यसरी संसारमा सबै दार्शनिक, चिन्तक, नेता, वैज्ञानिक, साहित्यकार सबै पुरूष भएका कारण नारीलाई अपमान गर्दै आएको कुरा नारीवादीहरुको आरोप छ । नारीवादीहरु नारीलाई प्रकृतिले ठगेको होइन कि सामाजिक व्यवस्थाले हीन तुल्याएको भनी आरोप लगाउँछन् ।
पश्चिमी मुलुकहरुमा नारी मुक्ति आन्दोलनको सुरूवात अठारौँ शताब्दीमा नै भएको पाइन्छ । सन् १७९२ मा सर्वप्रथम मेरी उलस्टोनक्राफ्ट, सन् १८६९ मा मार्गरेट फुलर, सन् १९२० मा रिबेका बेस्ट तथा भर्जिनिया उल्फ, सन् १९४९ मा साइमन डी बुभाजस्ता आदि महिला साहित्यकारहरुको योगदानबाट सशक्त बनेको पाइन्छ । खासगरी, सन् १९७० पछि नारीवादी दृष्टिकोणलाई प्रख्यात महिला साहित्यकारहरुले साहित्यका माध्यमले फरक मोडमा पु¥याएको पाइन्छ । नारीवादी सोचको विकास निम्न तीन चरणहरुमा भएको पाइन्छ :
आज संसारमा अझै पनि नारीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै सुधार भएको पाइँदैन । संसारका विकसित देशहरुमा समेत नारीहरु दोस्रो दर्जाकै रुपमा रहेका छन् । अर्कोतिर नारीहरुले पनि आफूलाई अब्बल, सक्षम र पुरूषभन्दा के कम भनी प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकिएको नै देखिन्छ । संसारका खासगरी मुस्लिम देशहरुमा अझै पनि नारीहरुलाई गरिने व्यवहार, राजनीतिक हकअधिकारको बाँडफाँटजस्ता कुराहरुमा विभेद नै गरेको पाइन्छ । महिलाले चुनावमा भोटसम्म हाल्ने अधिकारका लागि लडाइँ लड्नु परिरहेको छ । आफू चुनावमा प्रतिस्पर्धी भएर राज्यसञ्चालनमा सहभागी हुने त कहिले हो कहिले ? यतिसम्म कि नारीहरुले सवारीसाधन चलाउने लाइसेन्ससमेत नपाइरहेको अवस्थामा भर्खरै साउदी अरबमा त्यो अधिकार दिइएको छ । सिनेमा हेर्ने, खेलकुदहरु हेर्ने, स्वतन्त्र घुमफिर गर्ने कुराहरु प्राप्त गर्न पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । महिलाहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म महिलाहरु यसरी नै पीडित भइरहनुपर्ने अवस्था एकातर्फ छ । यस्ता खाले दमन, अतिक्रमण र प्रभुवादी सोचलाई परास्त गरी समान हकअधिकार प्राप्त गरी नारी पनि पुरूषजत्तिकै बराबरी हुन् भन्ने कुरा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रहरुबाट पुष्ट्याइँ गरी समान हक र समान पहुँचका लागि नारी आन्दोलन अझै अपरिहार्य देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला हकअधिकार र स्वतन्त्रताका कुराहरु प्राप्त गर्न पनि महिलालाई निकै आन्दोलन गर्नु परेको इतिहास छ । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मानी घरको चुलोचौकोमा, बच्चाको स्याहारसुसारमा, अनुत्पादनशील कार्यमा, परिवारको सेवासुषुश्रामा मात्र सीमित राख्ने अवस्थाबाट बिस्तारै मुक्ति पाउन थालेको संकेत देखा पर्दैछ । यीलगायत महिला भएको कारण गर्भमै भ्रूण नष्ट गर्ने, जन्मेपछि फरक दृष्टिले हेर्ने, किशोरी तथा बाल्यकालमा बलात्कार गर्ने, सानै उमेरमा बिहे गरिदिने, दाइजोका कारण मर्नुपर्ने, वंश परम्परा धान्न बच्चा जन्माउनुपर्ने, श्रीमान् छउन्जेल श्रीमान्को नियन्त्रणमा रही श्रीमान् मरेपछि छोराको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने, प्रजनन समस्याहरु बोकी बाँच्नुपर्ने र उचित उपचार नगर्ने, छाउपडी प्रथा मान्नुपर्ने, बुढेसकालमा बोक्सीको आरोप सहनुपर्नेजस्ता आदि अनगिन्ती समस्याहरु नेपालमा पनि छन् । जुन कुराहरु कोट्याइरहँदा यहाँ स्थान अभाव होला, तर यतिचाहिं भन्नैपर्ने हुन्छ कि नेपालमा महिलाहरुले अन्य देशको तुलनामा अल्लि बढी राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरिसकेका छन् । तर, यहाँ भन्न खोजिएको कुरा यस्तो अधिकार त्यत्तिकै प्राप्त भएको होइन कि यसमा ठूलो लडाइँ गरेर, आन्दोलन गरेर, अनशन बसेर, आत्मदाह गरेर ल्याइएका अधिकार हुन् । नेपालमा हाल महिलालाई हरेक निकायहरुमा आरक्षणको व्यवस्था, संविधानमा राजनीतिकरुपमा ३३ प्रतिशतको अधिकार, दक्षिण एसियामै पहिलोपटक पूर्णरुपले प्रजनन वा गर्भपतनको अधिकारजस्ता निकै मह¤वपूर्ण प्रगति हासिल गर्न नेपाली नारीहरु सफल भएका छन् । ती अधिकार प्राप्त भएकै कारण आज नेपालको राज्यसत्तामा महिलाहरुको तुलनात्मकरुपमा राम्रो उपस्थिति रहेको छ, तर पर्याप्त छैन । नेपालमा एउटा नारीले राष्ट्रपतिकै कुर्सीसमेत भेट्टाउनु नेपाली महिलाहरुको कम उपलब्धि हो भन्नचाहिँ मिल्दैन ।
अन्तमा, महिलाले जन्मनासाथ पुरूषजत्तिकै प्राकृतिक अधिकार पाएका हुन्छन्, तर पुरूषप्रधान राज्य भएका कारण महिलालाई दोस्रो नागरिक ठानी कृत्रिम विभेद सुरू हुन्छ र महिलाहरु स्वतः मारमा पर्छन् । निकै सहनशील, दयालु, मायालु र विवेकशील महिलाहरु आखिर पुरूषको षड्यन्त्रमा परिहाल्छन् र विभेदका सिकार हुन्छन् । प्रकृतिले महिलालाई पुरूषको दाँजोमा शारीरिकरुपमा केही कमजोर अवश्य बनाएको छ र महिनैपिच्छे हुने शारीरिक समस्या, प्रजननको जिम्मा, स्तनपान गराउनुपर्ने बाध्यताजस्ता आदि कारणले महिलालाई केही पछि पारेको छ । अन्यथा महिलामा पुरूषको जस्तो मानसिक क्षमता, सामाजिक सहभागिता र सृजनशीलता आदि अब्बल नै हुने गर्दछ । शारीरिक संरचनागत समस्याको फाइदा उठाई महिलालाई पुरूषले भेदभाव गर्नु र समान सहभागिता गराउन आनाकानी गर्नु केवल पुरूषको स्वार्थी भावना र पितृसत्तात्मक सोचको मात्र उपज हो । अतः महिलाहरु कुनै पनि कुरामा पुरूषभन्दा कमजोर नहुने भएपछि बराबरी हकअधिकार र दायित्वका लागि किन पुरूषसँग लडिरहनुपर्ने ? पुरूषले ती अधिकार दिए प्राप्त गर्ने र नदिए संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था किन ल्याउने ? संसारमा जब महिला र पुरूषमात्रै दुई जाति छन् भने विवेकको आधारमा कोही ठूलो र कोही सानो हुनुपर्दैन । यसो गरिए प्राकृतिक असन्तुलनसमेत हुन जान्छ । त्यसकारण महिला–पुरूष दुवै बराबरी हुन्, लिङ्गकै आधारमा कोही पनि ठूलो र सानो हुने होइन, दुवैले समान हकअधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सबैले हेक्का राख्नु आवश्यक छ । अझै महिलाले पूर्ण सशक्तीकरण र ५० प्रतिशत पुरूषसरह अधिकार नपाएसम्म आन्दोलनबाट विश्राम लिने अवस्था छैन । अथवा भनौँ विभिन्न क्षेत्र, तह र तप्कामा लैंगिक समानता नभएसम्म नारी आन्दोलन पछि हट्नु पनि हुँदैन ।
दिउँसो भाँडिएको विवाह राति ‘सुटुक्क’